Taageerayaasha Manchester United oo Maxamed Saalax dartii u Weerarary Xiddigoodii hore ee Robin van Persie!!! – Gool FM
(Europe) 25 Abriil 2018. Taageerayaasha Manchester United ayaa Maxamed Saalax Dartii u weeraray weeraryahankoodii hore ee Robin van Persie kaddib markii uu laacibka reer Holland ammaanay xiddiga reer Masar.
Maxamed ayaa wacdaro lala ashqaraaray xalay ka dhigay Anfield kaddib markii uu labo gool ka xareeyay labo kalena caawiyay dheeshii ay xalay Liverpool 5-2 uga adkaatay Roma lugta hore ee afar dhammaadka Champions League.
Rugcadaaga reer Holland ayaa soo dhigay bartiisa Twitter qoraal yar oo gaaban uu ku ammaanayo xiddiga Liverpool.
Salah ayuu ku sheegay inuu la mid yahay Holac, Xiddig iyo fiicnaansho oo ugu dambeyn wada tilmaamaya inuu yahay laacib shidan.
Taageerayaasha Man United oo xifaaltan wayn kala dhexeeyo Liverpool ayaa ku soo weeraray barta Twitter ka.
Qaar baa soo qoray ka saar hadda waxaad soo qortay, kuwa baa u raaciyay waadna qiyaaneysaa ee hadda ka saar.